သရုပ်ဆောင်နေတိုး နှင့် 10 minutes interview
ကြောက်ကြောက်ကြောက်(၂) ရုပ်ရှင်ကန်တော့ပွဲပေးအခမ်းအနား မှာ မီ၊ မုန်းစွဲ စတဲ့ သူပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ တစ်ပြိုင် နက်တည်း ရုံတင်ပြသနေသလို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရုပ်ရှင်တွေရိုက် ကူးဖြစ်နေသူက သရုပ်ဆောင်နေတိုး ပါ။ သူနဲ့ ခဏတာတွေ့ဆုံခိုက် မေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Written by	ကလောင် - Olive	 11 December 2018
ခုချိန်မှာ အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာဆိုတဲ့ သဲနော်ဇာ
Q. ခုချိန်မှာ အများဆုံးရင်ဆိုင် နေရတဲ့ Stress & Pressure
A. အလုပ်မလုပ်ရရင် စိတ်ထဲနေ လို့မကောင်းဘူး။ အလုပ်မလုပ်ရရင် ဖျားချင်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ အဲဒီ ဖိအားပဲရှိတယ်။
Written by	ကလောင်-ရွေရင်ငြိမ်းအေး 11 December 2018
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အမှိုက်တွေလာထည့်ရင် ကိုယ်ပဲ စိတ်ညစ်ရမှာမို့ စိတ်ကို ရှင်းရှင်းပဲထားတယ်
MRTV မှ အစီအစဉ်တင် ဆက်သူ သဇင်နွယ်ဝင်းက ရုပ်သံ ပရိသတ်အပြင် Social Media မှာ လည်း ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ ချစ် ခင်သူအများအပြားရှိတဲ့ အောင်မြင် သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Before & After ကိုရီးယားအလှကုန် မိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုမှာ အခမ်းအနား မှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူ့ကို ခဏတာတွေ့ဆုံခိုက် မေးဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။
Written by	ကလောင် - Olive	 10 December 2018
ကိုယ့်ရှေ့မှာ တစ်ခုခုမျက်စိ ဆံပင်မွှေးဆူးတဲ့ဟာဖြစ်ပွားရင် နည်း နည်းလေးပြောလိုက်ရမှ.....ရွှေအိမ်စည်
အိမ်စည်က ပြောချင်နေတာ အမြဲကိုယ့်ရှေ့မှာ တစ်ခုခုမျက်စိ ဆံပင်မွှေးဆူးတဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်ကနေ နည်းနည်းလေး ပြောလိုက်ရမှ။ ဒါပေမဲ့ ပြောတဲ့ အချိန်မှာလည်း အိမ်စည့်ဘက်က အမြဲတမ်းဆင်ခြင်တယ်။ ဆင်ခြင် တယ်ဆိုတာ ကိုယ်က ပြောချင်ပေ မယ့်လည်း ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ ဘယ် လိုနေရာမှာ ဘယ်လိုလေးပြောလိုက် မလဲဆိုတာ အရေးကြီးသေးတယ် လေ။ ဒီတိုင်းပဲ ပေါက်တတ်ကရ လျှောက်ပြောပြီးတော့ ှ့မေန လို့ မရဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ပြောမယ့် စကားလုံးတွေကို သေသေချာချာ ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။
Written by	8days Journal Administrator	 30 August 2018
Crown ဝယ်မယ့်အစား ဒီထက်ပိုလှအောင် ပြင်လိုက်မယ်.......ယွန်းဝင့်လွှာအောင်
အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အခုထိတော့ မစီစဉ်သေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆို တော့ ကိုယ်လည်း ဘာမှမပြည့်စုံ သေးဘူး။ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းနေ တာကလည်း လိုချင်တဲ့အတိုင်း အတာထိ မရောက်သေးဘူး။ လိုချင် တဲ့အတိုင်းအတာထိရောက်ပြီ၊ ကိုယ့် အတွက်လည်း တကယ်သင့်လျော် တဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက် နဲ့ တွေ့မယ်ဆိုရင် မိဘတွေလည်း သဘောတူတယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီအချိန် ကျမှ လက်ထပ်ဖြစ်မယ်။